Diastia safavida - Wikipedia
Ny dinastia safavida na sefevida dia na fianakavia-mpanjaka nanapaka tao Persia tamin' ny taona 1501 hatramin'ny taona 1736. Atao hoe صفویان / Safaviān izy ireo amin'ny teny persana, fa صفوی‌لر / Səfəvilər kosa amin'ny teny azery. Nandimby ny Tomorida izy ka dinastia voalohany nahaleo tena tanteraka izay nanapaka an'i Iràna nandritra ny 500 taona any ho any.
Ny Safavida dia nipoitra tamin'ny antoko tao amin'ny fivavahana silamo sonita sofỳ izay niorina tamin'ny taonjato faha-14. Na dia miteny torka aza izy ireo dia tsy fantatra mazava ny foko nipoirany, satria ny Safavida dia nanova izany noho ny antony ara-pirehankevitra, mety ho Korda izy ireo.
Niova finoana ho amin'ny siisma izy ireo tamin'ny taonjato faha-15, angamba tamin'ny andron'i Khwajeh Ali na tamin'i Jonayd, ka nanambara izy ireo fa io no fivavaham-panjakana tamin'ny nanadraisan'i Ismail ny fahefana tamin'ny taona 1501. Nanohana azy ireo ireo vahoaka mpifindrafindra monina torka Kizilbasy, nanomboka tamin'ny taona 1508, ka nanapaka ny tany manontolo notapahan'ireo Ak-Kôionlo (Aq Qoyunlu) teo aloha izay miteny torka ihany koa.
Nisondrotra avo ny herin'ny Safavida sady namorona fitondrana teokratika izy ireo izay notariin'ny shah, ka nanomboka tamin'ny taona 1510 dia nifanandrina tamin'ny Ozbeka tao atsinanana izay miteny torka ihany koa (izay notarihn'i Mohammad Shaybânî) izy ireo, sy tamin'ny Ôtômana tao andrefana izay mpiaro ny sonisma.
Nahatratra ny fara tampon'ny tanjany ny dinastia safavida tamin'ny nitondran'i Abbas I, izay shah nanomboka tamin'ny taona 1588 hatramin'ny taona 1629, izay nanasaraka ny fahefana ara-pivavahana tamin'ny fahefana ara-politika teo amin'ny empira, ka nanangana mpiambina manokana nahitana andevo novaim-pinoana ho silamo, atao hoe ghulams, mba hanoherana ireo foko kizilbasy (Qizilbashs). Iray tamin'ireo hery telo tao amin'ny tontolo miozolmàna ny Safavida, nanampy ny Empira Ôtômàna sy ny Empira Môngoly, izay nifandray tamin'ny mpanjaka eorôpeana, izay naniry hametraka firaisana hanoherana ny Vavahady Avo (torka ôtômana: باب عالی / Bāb-ı āli; frantsay: Sublime Porte).
Ireto ireo mpanjaka/mpanapaka nifandimby:
Ismail II (1576–1578)
Mohammad Khodabanda (1578–1587)
Sultan Husayn I (1694–1722)
Suleyman II (1749-1750)
Ismail III (1750-1760)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Diastia_safavida&oldid=1011373"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 09:07 ity pejy ity.